Video Statistics Vital Statistics for B2B Marketers | Martech Zone
Video Statistika Vital ho an'ny mpivarotra B2B
Mety ity ny sary an-tsary mampiala voly sy mahay mandanjalanja indrindra hitako B2B Marketing. Raha ny antontan'isa dia natambatra herintaona lasa izay, dia mazava ny lokony amin'ny fomba nividy fihetsika niova amin'ny orinasa ho orinasa. Manome porofo iray taonina ihany koa momba ny fomba sy ny antony ilana paikady sy paikady sosialy amin'ny marketing B2B!
Somary nanahirana kokoa ny fomba fividianan'ny orinasa, ka nametraka fanontaniana izahay: 'Ity ve no farany hanaovana fampielezan-kevitra ivelan'ny trano?' Eny, ny horonantsary ataonay manaraka dia mirakitra ny zava-misy rehetra sy ny statistikan'ny mpivarotra hananganana raharaham-barotra ho an'ny paikadim-barotra madiodio anaty sy ivelany. Nisy dinôzôro aza tao. kafanam-po
Ny lohahevitra manan-danja mandritra ity horonan-tsary ity dia mandroso mahitsy… ampahafantaro ny vinavinanao, aza amidy aminy. Ny fahaizana manao varotra dia mora kokoa raha ampianarina ny vinavinanao - tsy amin'ny vokatrao ihany - fa ny fahaizanao sy ny fahefanao ao anatin'ny orinasa.
Ity ny manaraka B2B Vital Statistics infographic:
Tags: vidin'ny fahazoanab2b marketing anatymarketing amin'ny finday b2bb2b marketing ivelanyContent Marketingfahazoana mpanjifafiverenana amin'ny fampiasam-bolampamaky whitepaperwhitepapers